XAALADA Suuqa iyo wararka Waregeysyada. - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha XAALADA Suuqa iyo wararka Waregeysyada.
XAALADA Suuqa iyo wararka Waregeysyada.
Jose Mourinho ayaa qaadan doona £ 15m xili ciyaaredkiiba ,haddii uu noqdo Tababaraha kooxda Manchester United xagaaga soo socda, waxa uu £ 6m ka yar yahay tabaraha Manchester City Pep Guardiola. Sida ay leedahay (El Confidencial via The Sun)
Mourinho, oo 53 jir ah, ka noqdo Old Trafford. Waxaa daabacay (Daily Star)
Tababaraha reer Portugal ayaa u sheegay United Gudoomiye ku xigeenkeeda fulinta in la iibiyo khadka dhexe ee Juan Mata, oo 27 jir ah iyo Marouane Fellaini, oo 28 jir ah sida ay leedahay (Daily Mail)
Tababaraha kooxda Atletico Madrid Diego Simeone, oo 45 jir ah, ayaa kusoo biiray liiska macalimiinta lala xiriirinayo shaqo Chelsea, waxaa qoray. (Daily Mail)
Chelsea ayaa u muuqata inay iska iibin doonto weeraryahanka Loic Remy, oo 29 jir ah, ka dib marka uu ciyarao kulanka Paris St-Germain iyo Manchester City todobaadka soo socda.waxaa qoray warkaan (Evening Standard)
Tababaraha kooxda Inter Milan Roberto Mancini ayaa doonaya in uu la midoobo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City Yaya Toure, oo 32 jir ah, iyo daafaca Pablo Zabaleta, oo 31 jir ah.waxaa lagu daabacay (Daily Mirror)
Inter ayaa aqbali doonta dalab £ 35m oo ay Manchester United ku dooneyso weeraryahanka Mauro Icardi, oo 22 jir ah, hadiisidaasi waxaa bahiyay. (Tuttosport – Sport)
United ayaa dalab £23m ka gudnbisay garabka Argentine Nicolas Gaitan, oo 27 jir ah, kaso Benfica ay u diideen January. Sidaasi waxaa dabacay maanta (Talksport)
Red Devils ayaa ku dhow inay lasaoo wareegaan Ciyaaryahanka khadka dhexe Ever Banega, oo 27 jir ajkasoo lagu heli karo, heshiis £ 3.5m sida uu bahiyay (Sport Press )
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa doonaya inuu lasoo saxiixdo weeraryahankii hore ee Manchester United Javier Hernandez, oo 27 jir ah, xagaaga dambe. Waxaa qoray (Sport Press via Metro)
Daafaca Everton Phil Jagielka, 33, waxaa lagu siin doonaa fursad uu ugu dhaqaaqi lahaa macaashka Chinese Super League. (The Sun)
Weeraryahanka kooxda Fenerbahce Emmanuel Emenike, kaasoo amaah ku jooga West Ham, ayaa weli bartilmaameed u ah Shanghai Shenhua. Kooxda Chinese ayaa la fahamsan yahay in ay 28-sano jirkaan heshiis £ 5.5m ku doonayaan waxaa qoray. (Daily Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Michael Carrick, oo 34 jir ah, ayaa isaguna heshiis u kordhin doona xagaaga soo aadan kooxdiisa. Sdia uu leeyahay (Times – Times)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Willian ayaa qiimaha daafaca John Terry, oo 35 jir, ku sheegay midka ugu fiicnaa abid ee kooxda Blues, laakiin waxaaa la filayaa inuu ka tago kooxda xagaagan. Waxaa qora (Squawka.com)
Liverpool ayaa ku dhow inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Cameroon Joel Matip oo 24-sano jir ah kadib markii uu iska diiday heshiis inuu u kordhiyo Schalke Waxaa qoray (Daily Star)
Previous articleQiimaha tikidhida garoonka Liverpool oo la dhimay kadib dibad bixii taageerayaasha.
Next articleDhageyso Br. Cayaaraha ee Idaacadda Risaala 11-02-2016